Marigny Calculator: mashandisiro ekushandisa iyo Marigny fomula mukutamba uye roulette
Unotoziva zvazviri e mashandisiro eMarigny fomula?
Marigny de Grilleau (1855-1942) aive mudzidzi weroulette, anonyanya kurangarirwa nekuda kwebhuku rake Unowana Scientifique d'une seule unitè, mhando yezvinyorwa zvitsvene zvevatsigiri vemutambo 'kunyange wakakura' kana huchokwadi hwe 'hit sarudzo'.
Zvidzidzo zvake zvenguva zvakamutungamira kuti aongorore zvaaifunga seAchilles chitsitsinho cheiyo roulette, ndiko kuti: iyo mipata.
Kuti unzwisise kana mutsauko (gap) iri kucherechedzwa unowira mukati mezvakanaka kana kana uri muganho mamiriro anogona kushandiswa nemutambi, Marigny akagadzira fomula yakapusa, iyo inosimbisa kuti mutsauko uripakati pemikana miviri inopesana hautombodarika kakapetwa kashanu mudzi wedivi wekuedza kunoonekwa.
Semuenzaniso, mu100 roulette spins (square square ye100 = 10) iyo Marigny muganho mutsauko ndeye 5 x 10 = 50.
Mumakwara mazana maviri (square square of 200 = 200) muganho wekutsauka uri 14,14 x 5 = 14,14.
Iyo Marigny fomula
Kuti tione kuti iko iko kukwana kwemusiyano watiri kucherechedza, tinogona kushandisa inotevera fomula, iri chaizvo inoshanda kune ese mabatanidzwa e roulette kana chero mumwe mutambo uye nekudaro kwete chete kune yakapusa mikana, sekufungidzirwa panguva iyoyo naMarigny.
Mashandisiro ekushandisa iyo Marigny fomula: tsananguro yefomula
P = Mukana wekubatanidzwa (pasina kufunga zero);
N = Yakazara nhamba yekuyedza yakatarwa;
C = Nhamba yemhando yemukana unoonekwa.
Semuenzaniso, mukutenderera kwemazana maviri erosso roulette, tinonyora kuti yechishanu yechitanhatu yakabuda ka200: uyu ndiwo musiyano musiyano?
Pasina kutyora musoro wako zvakanyanya nekuverenga, unogona kushandisa iyo Marigny Calculator, inotakurika kubva pane iyi link iripazasi uye nekutenda kwaunogona kujekesa mamiriro kwete chete kune Roulette, asiwo yemimwe mitambo, inosanganisira mitambo yekubheja.
Mumuenzaniso uri pamusoro, kukosha kunodzoserwa nechirongwa kuri 4,2458 uye zvirokwazvo kwakakwirira, asi zvakadaro kure nemuganhu we5.
Mashandisiro ekushandisa iyo Marigny fomula: kunyorera kumitambo kubheja
Zvemitambo kubhejera kuverenga kwakafanana, iwe unofanirwa kunongedza cheki iri pamusoro (Sports Betting) uye nekuisa iwo maitiro, kusanganisira mikana yawakatamba mitambo iyi, ino mune ino kesi inonzwisiswa seyakaenzana mikana (Avg Odd).
Asi chii chiri basa rekuziva iyo Marigny coefficient yekutamba nhabvu?
Zviripachena hatife takave nemazano akanangana ekubhejera kwedu, asi neiri kubheja kana roulette software unogona kuongorora (uye hazvisi zvishoma) kushanda kwenzira / sarudzo yauri kushandisa.
Muchokwadi, kana iwe waida kuve ne 'chingangove chokwadi' chiratidzo chekurohwa roulette kana chero mumwe mutambo kana mubhuki neako nzira, zvirokwazvo chishandiso Marigny Calculator chichava chiyero chakakodzera uye chishandiso
Muchokwadi, kana nekupinda mhedzisiro yakanyorwa nemitambo yako yekubheja nzira iwe unofanirwa kuwana iyo CM kukosha yakaenzana kana yakakura kupfuura 5, unogona kufunga zvakanyanya kubhuka kweCaribbean cruise kana mota yemhando yepamusoro yawakagara uchirota nezvayo!